Jiromanga tsara tarehy ho an'ny zazavavy
Jacket no karazana amboarampeo malaza indrindra ho an'ny zazavavy maoderina. Ny hoditra sy ny baolina, milahatra amin'ny milisy miloko na vice versa, miloko volombatolalaka sy volom-borona - akanjo marevaka ho an'ny tovovavy dia mbola maharesy sy mahagaga. Karazan'akanjo manao ahoana no hisafidianana tovovavy?
Jiromamy mody ho an'ny zazavavy
Tsy misy fanangonana ny mpanamboatra mpitarika tsy afaka manao tsy misy jirobe tsara tarehy ho an'ny zazavavy. Ny mpanamboatra lamaody dia mampiasa ny fivoaran-dalan'ny taloha ary manala azy ireo amin'ny akora sy tsipiriany vaovao. Ity vanim-potoana ao amin'ny fanangonana ity dia ireto manaraka ireto:
Grunge sy rock. Te haneho fahalalaham-pitiavana ve ianao? Misafidiana akanjo lava ho an'ny ankizivavy amin'ny endrika fikomiana. Ny spikes metaly, ny kapaoty, ny rivotra ary ny hoditra dia mamela anao hitondra ny sarin'ireo marika mampihetsi-po izay zakan'ny ankizivavy. Ireo jirobe ireo dia aseho amin'ny fanangonana KTZ, Dion Lee, Diezel, Jason Wu , Moschino.
Manintona. Tandremo ny jiromitsitra kely, izay manana silhouette miloko, fohy ny lavany na ny taho matevina. Izy ireo dia asehon'ireo marika toy ny Dsquared, Dennis Basso, Just Cavalli, Wes Gordon.
Fanatanjahan-tena ho an'ny tovovavy. Ara-drariny ho an'ny olona mavitrika, izay manome lanja ny fampiononana sy ny asany. Eto ianao dia afaka maka rivotra mahazatra, kiraro fohy sy zaridaina. Naseho teo amin'ny andalana an'i Philipp Plein, DKNY, Rihard Nicoll.
Ny fisafidianana ny akanjo ivelany dia zava-dehibe amin'ny fandraisana ny taonanao, ny endrikao ary ny fomba fiainanao. Ankizivavy tanora mavitrika dia hifanaraka amin'ny tovovavy ho an'ny tovovavy, voaravaka amin'ny endritsoratra mamirapiratra sy ny antsipiriany miresaka, fa ny vehivavy adolantsento adolantsika dia tokony hijanona amin'ny jiromitra vita amin'ny hoditra, natao ho an'ny jirokely. Ho an'ny ankizivavy feno dia tsara kokoa ny misafidy jiro avy amin'ny lamba malefaka manana tandroka manify, fa ny tanjaky ny ankamaroan'ny modely dia manatona.
Sarafany mafana ny vehivavy
Vehivavy mitafy tendan-tanana
Sakafo efa vita
Kiraro matevina - 30 sarin'ny clogs vehivavy lamaody
Ny akanjo ho an'ny vehivavy feno
Vehivavy Cashmere Short Coat
Kiraro kiraro amin'ny felana - ireo modely ririnina mafana
Ankizivavy efa bevohoka
Ahoana ny fomba hampianarana kisoa amin'ny fanaka?
Zavona kely kely avy amin'ny planeta izay manoatra noho ny fahendren'ny olon-dehibe
Ny rantsan-tànana ankavanana
Makrôla amin'ny foibe ao anaty lafaoro - hevitra fototra momba ny trondro fisakafoanana
Voninkazo vita amin'ny volon'ondry
Sandamy eo ambonin'ny vatolampy
Miakanjo amin'ny tanany amin'ny tanana lava
Hugh Hefner sy ny vadiny
Ahoana no iainana rehefa mihazakazaka?
Ny sarimihetsika Kazakh Kazakh
Ahoana ny fampiasana sigara elektronika?
Hazo tongolobe any am-pofoana manitra
Modely Ana Beatriz Barros sy ny vadiny Karim El Saiti no lasa ray aman-dreny
Manimba ny fantsom-behivavy
Biby amin'ny soja soja
Titans - iza ary ahoana no nipetrahan'ny angano grika?
Inona no manampy ny sarin'i Sergius avy amin'i Radonezh?
Sakafo Japoney sy ny votoaty
Fiotazana fako eny amin'ny lohataona
Scythe amin'ny 4 strands
Kitay mihintsy ho an'ny hoditra maromaro